Trump Ma u Isticmaali Karaa Dibad-baxayaasha Ciidamada Milateriga? | Marsa News
Trump Ma u Isticmaali Karaa Dibad-baxayaasha Ciidamada Milateriga?
June 3, 2020 - Written by editor marsan
Hargeisa:(Marsanews) Xilli ay mudaharaadyo rabshado wata ka socdaan guud ahaan dalka Mareykanka, ayuu madaxweyne Trump ku hanjabay inuu milatariga u adeegsan doono dajinta xaaladda.
Muddo hal isbuuc ah ayey meelo badan oo ka mid ah waddanka ku gaareen dibadbaxyada ay wadaan dad ka careysan dilkii nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska.
George Floyd ayaa magaalada Minneapolis ku dhintay 25-kii bishii lasoo dhaafay, waxaana dilkiisa dacwad loogu soo oogay askari mareykanka cad ah.
Laakiin dadka mudaharaadaya qaarkood ayaa boob u geysanaya ganacsiyada, iyagoo dab qabadsiiyo xarumo ay booliska leeyihiin.
Mr Trump ayaa sheegay inuu milatariga u diri doono magaalooyinka iyo gobollada ku guul darreystay inay wax ka qabtaan xasilooni darrada.
Haddii magaalo ama gobol ay diidaan inay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah.. markaas waxaan howlgalin doonaa milatariga Mareykanka.Donald Trump
Laakiin qaar ka mid ah madaxda gobollada ayaa sheegay in dowladda dhexe aysan wax awood ah u lahayn inay ciidamo heer federaal ah howl galiso iyadoo aan fasax laga heysanin maamul goboleedyada.
Madaxweynaha ma diri karaa milatariga?
Haddii su’aashaas jawaabteeda lasoo gaabiyo waa “haa” inkastoo ay xaalado gaar ah ku xiran tahay.
Waxaa horayba u jiray kumannaan askari oo magaalooyinka ka howl gala, kuwaasoo ka tirsan ciidamada keydka milatariga.
Waxay ciidankaas ku sugan yihiin in ka badan 20 gobol oo ka tirsan Mareykanka, iyagoo isku dayaya inay wax ka qabtaan mudaharaadyada, laakiin askartaas milatariga ka socota waxaa si gaar ah u codsaday magaalooyin iyo maamul goboleedyo.
Hase yeeshee, sharciga Mareykanka waxaa qarnigii 19-aad lagu daray in arrimaha qaarkood ay horseedi karaan in dowladda uu fadhigeedu yahay Washington DC ay faraglin sameyn karto iyadoo aan fasax ka qaadanin maamul goboleedyada.
Image captionCiidamada ilaalada qaranka waxay keyd u yihiin milatariga
Sharcigaas wuxuu dhigayaa: “Ansixinta gobarnatoorayaasha looma baahna marka uu madaxweynaha go’aan kasoo saaro xaaladda ka taagan gobol ay hor joogsato in sharciga Mareykanka laga fuliyo, ama marka ay khatar soo food saarto xuquuqda muwaadiniinta.”
Xeerkaas waxaa qalinka lagu duugay sanadkii 1807, si madaxweynaha xilka haya loogu sahlo inuu qaado tallaabooyin lagama maatmaan ah.
Sharci kale ayaa la ansixiyay sanadkii 1878, wuxuuna dhigayaa in Aqalka Wakiillada uu fasaxo go’aannada milatariga loogu adeegsanayo arrimaha gudaha.
Laakiin khabiir ku xeel dheer arrimaha sharciga ayaa sheegay in sharcigii hore uu ku filan yahay inuu madaxweynaha adeegsado marka uu go’aamada kaligii ku eeg qaadanayo.
Waa la wada oggol yahay in madaxweynaha uu xuquuq dhinaca sharciga u leeyahay howlgalinta milatariga isagoo aan cidna amar ka sugin.
Sharcigan ma yahay mid hore loo isticmaalay?
Sida laga soo xigtay xogta Golaha Wakiillada, sharciga madaxweynaha awoodda u siinaya adeegsiga milatariga waxaa horay loo isticmaalay tobannaan jeer, inkastoo aan la adeegsanin muddadii 30-ka sano ahayd ee lasoo dhaafay.
Markii ugu dambeeyay waxaa sanadkii 1992-kii ku dhaqaaqay madaxweynihii hore ee Mareykanka George HW Bush, xilligii ay socdeen mudaharaadyadii isirka ku saabsanaa ee ka dhacay magaalada Los Angeles.
Sharcigaas waxaa si joogto ah loo adeegsan jiray sannadihii 1950-meeyadii iyo 1960-meeyadii, markaas oo ay Mareykanka ka socdeen kacdoonnadii dhinaca xuquuqda shacabka.
Waxaa waqtiyadaas adeegsaday saddex madaxweye oo soo maray Mareykanka.
Madaxweyne Dwight Eisenhower ayaa wajahay diidmo markii uu sharcigaas adeegsaday sanadkii 1957-kii, isagoo damacsanaa inuu milatariga u diro mudaharaadyo ka socday Iskuul ku yaalla gobolka Arkansas, halkaasoo carruur isugu jira caddaan iyo madow si wadajir ah wax loogu bari jiray.
Tan iyo dhammaadkii 196-meeyadii, in sharcigaas la isticmaalo waxay ahayd dhif.
Aqalka Wakiillada ayaa dib u eegis ku sameeyay sanadkii 2006-dii kadib markii ay Mareykanka ku dhufatay duufaantii Katrina.
Ujeeddadu waxay ahayd in milatariga la helo caawinaad, laakiin dib u eegistii waa laga noqday kaddib markii maamul goboleedyada ay kasoo horjeesteen.